Degso UC Browser loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (1.20 MB)
Degso UC Browser,
UC Browser, oo ka mid ah daalacashada ugu caansan ee aaladaha mobilada, wuxuu horey u gaadhay kumbuyuutaro ahaan codsi Windows 8 ah, laakiin markan, kooxdii soo saartay codsi dhab ah oo desktop ah waxay siisaa biraawsar si habsami leh ugu shaqeyn doona Windows 7 dadka isticmaala PC
Browser-ka, kaas oo ku adkaysanaya bixinta khibrad u dhiganta nooca mobilka; Waxay maamushaa wareejinta calaamadaha ay adeegsadayaasha Android, iOS iyo Windows Phone ay ku leeyihiin taleefannadooda ama kiniiniyada si toos ah biraawsarka desktop-ka. UC Browser, oo lagu bixiyo bilaash sida noocyada mobilada, waa biraawsar soo koray sanado badan isla markaana si aamusnaan leh ugu soo dhowaanaya tartamayaashiisa, kuwaas oo ah kooxaha waaweyn ee suuqa.
Waa suurtagal in la helo astaamaha la raadinayo ee biraawsar bilaa casri ah oo wata UC Browser. Browser-ka, oo ay ku jiraan dhammaan shaqooyinka sida daaqad qarsoodi ah, taageero-ku-xirnaanta, iyo maareeyaha calaamadaha, ayaa sidoo kale u keenay waayo-aragnimadiisa moobilka moobilka. Xulashada xakamaynta ugu badan ee arintan la xiriirta ayaa ah inaad u xilsaari karto amarro si aad u soo jiidatid dhaqdhaqaaqyada adigoo gujinaya midig-guji.
Waa macquul inaad aragto UC Browser, oo leh muuqaal aad u qurux badan oo si fudud loo fahmi karo, wuxuu casharo ka qaataa daalacayaasha sida Chrome, Firefox iyo Opera. Browser-ka, oo dhigaya astaamo la mid ah badhanka caanka ah ee Firefox ee bidixda kore, wuxuu ku siinayaa liiska xulashooyinka aad uga baran jirtay Opera haddii aad gujiso halkan. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo naqshadeynta tabsku ay aad u kala duwan tahay, haddana waxaa suurtagal ah in lagu soo qaado dhiirrigelinta Google Chrome muuqaal ahaan.
Haddii aad gujiso astaanta dharka lagu dhaqo ee geeska midig ee kore, liis mawduuc la soo jeediyey ah ayaa ka muuqan doona tab cusub. Ma aha wax adag in laga doodo in tayada mowduucyada la diyaariyey, ee lagu bixiyo midabbo iyo naqshado rafcaan u leh dhammaan kooxaha da kasta, ay aad u wanaagsan yihiin, xitaa haddii ay jiraan noocyo yar. Isla marka aad rakibto, waad soo dejin kartaa calaamadahaaga bog furayaasha kale ilbidhiqsiyo gudahood, markaa uma baahnid inaad ku mashquusho fiilooyin sida Adobe Flash. Waxaad daawan kartaa fiidiyowyada Facebook iyo YouTube isla marka aad isticmaasho UC Browser.
Waad ku mahadsan tahay maareeyaha feylka xariifka ah, halkaasoo aad dib uga bilaabi karto soo dejintaada hakad galay goor dambe, waad ka sii wadi kartaa howshaada halka uu ku xirmay xiriirku. Wixii khibrad ah ee dareeraha duufaanka badan, haddii aad doorbideyso, bogagga aad booqato had iyo jeer waxay la imaanayaan hannaanka horay loo soo rarayo waxaadna gaari kartaa bogga aad rabto laga bilaabo marka aad gujiso.
UC Browser, oo xamili kara ikhtiyaarka iskudhafka daruurta iyadoon loo baahnayn barnaamij kale, waxay fududeyneysaa inaad u guurto cinwaanada isku xirka ah ee aad raacdo qalabkaaga mobilada oo aad ugu wareejiso desktop-kaaga sidii calaamado. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso tan waa inaad gujisaa astaanta ku taal dhinaca midig ee midigta baararka calaamadaha.
Haddii aad ka daashay daalacashadaadii hore oo aad raadineyso biraawsar cusub oo beddel ah, UC Browser ayaa ah ikhtiyaar ku habboon qancinta xiisahaaga.
UC Browser Noocyada
Cabirka Faylka: 1.20 MB
Horumar: UCWeb Inc